The while True: learn () game isalimit time for free ကျွန်တော်က mac ကပါ။
Epic Games များကို လာမည့် ကြာသပတေးနေ့9ရက်နေ့ နေ့လည်5နာရီအထိ၊ စပိန်စံတော်ချိန်၊ True နေစဉ်လေ့လာရန် ()ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောင်သည် ၎င်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောင်သည် ၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်သော်လည်း စက်သင်ယူမှုနှင့် အာရုံကြောကွန်ရက်များဖန်တီးရာတွင် ပါရဂူတစ်ဦး၏ဖိနပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ထည့်ထားသည့်ဂိမ်းဖြစ်သည်။
True: learn() ဖြစ်နေချိန်မှာ ငါတို့လုပ်ရမယ်။ ပဟေဠိများကိုဖြေရှင်းပြီး လူသားဘာသာပြန်သူထံသို့ ကြောင်တစ်ကောင်ကို တည်ဆောက်ပါ။. အရေးကြီးသောအချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကြောင်ကို နားလည်ရန်ဖြစ်သော်လည်း အရေးကြီးသည့်အရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောင်ကို နားလည်ရန်ဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် စက်သင်ယူမှု၊ အာရုံကြောကွန်ရက်များ၊ ကြီးမားသောဒေတာနှင့် Artificial Intelligence တို့နှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့် Simulation ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Epic Games Store တွင်ရရှိနိုင်သည့် ဤဂိမ်း၏ဖော်ပြချက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ True- learn() သည် ဆော့ကစားလိုသူများအတွက် စံပြဖြစ်နေသော်လည်း၊ machine learning နှင့် ဆက်စပ်နည်းပညာများ အလုပ်လုပ်ပုံကို လေ့လာပါ။.
မိဘများနှင့် ဆရာသမားများအတွက်လည်း အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ကလေးတွေကို နည်းပညာမိတ်ဆက်ဖို့ ပျော်စရာနဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကို ရှာဖွေနေပါတယ်။ခေါင်းလှည့်ရတာကို နှစ်သက်ပြီး ပျော်ရွှင်နေချိန်မှာ အသစ်အဆန်းတွေကို စမ်းကြည့်ချင်သူတွေအတွက်ပါ။
while True: learn() ကို သင့်အတွက် ရနိုင်ပါသည်။ လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါ Epic Games Store မှတဆင့် Mac နှင့် Windows အတွက်။ ဒီခေါင်းစဉ်၊ ပုံမှန်ဈေးနှုန်းကတော့ယူရို ၁.၉၉ ပါ ကမ်းလှမ်းချက်သည် ကြာသပတေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက် စပိန်စံတော်ချိန် ညနေ ၅ နာရီတွင် ရနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
while True: learn() လိုအပ်ချက်
ဤပဟေဠိခေါင်းစဉ်ကိုခံစားနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကို စီမံခန့်ခွဲရမည်ဖြစ်သည်။ macOS 10.9 Mavericks၊2GHZ နှင့်2GB RAM ဖြင့် တွဲဖက်. ဂိမ်း၏အသံများသည် အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်သော်လည်း စာသားကို စပိန်တွင် စပိန်နှင့် လက်တင်အမေရိကရှိ စပိန်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထားသည်။
ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူဖို့၊ Epic Games အကောင့်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။အကောင့်၊ ခေါင်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်မည့်အကောင့်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အမှန်တကယ်ကစားရန်အချိန်ရှိသည့်အခါ ၎င်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ ၎င်းကိုဝယ်၍ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » မှန်နေချိန်တွင်- အကန့်အသတ်ရှိသောအချိန်အတွက် အခမဲ့လေ့လာပါ။
အသစ်ထွက် MacBook Pro များတွင် SD ကတ်ဖတ်သူ ပြဿနာများ